निर्मला फर्कँदा बाटोमा पर्ने दुई घर जसमध्ये एउटा यसकारण पर्‍यो अनुसन्धानको घेरामा (#WhoKilledNirmala शृङ्खला ४)
27th November 2018, 07:01 pm | ११ मंसिर २०७५
यसमा प्रयोग गरिएका सबै नक्सा गुगल म्यापबाट लिइएको हो।
जतिखेर निर्मला त्यहाँबाट निस्केकी भनिएको थियो, त्यसको तीन-चार मिनेटमा ठूलो पानी परेको थियो। कतै निर्मला ओत लाग्न कुनै घरमा त गइनन्? किनभने वर्षे विदाको 'होमवर्क' गरेको कापी उनको साथमा थियो। भिज्नबाट त्यसलाई जोगाउन साइकल त्यतै छाडेर निर्मला ओत लाग्न कतै त गइनन्? गएकी भए कुन घरमा गइन्?
त्यो घरमा त्यतिबेला कोही नभएको अनुसन्धानमा खुल्यो। बाँकी रह्यो अर्को घर - चक्रदेव बडुको।
'उहाँ शव भेटिएपछि घटनास्थलमै जानुभएको थियो। त्यहाँको फोटो खिचेर ल्याउनुभएको छ,' चक्रकी श्रीमतीले प्रहरीलाई भनिन्।
तर, चक्रले चाहिँ 'म शव भेटिएको ठाउँमा गएकै छैन। मैले फोटोसमेत खिचेको छैन' भनिरहे।
यसपछि स्वभाविक रुपमा प्रहरीको शंका उनीतिर तेर्सिनु अनौठो भएन। पूर्व एआइजी नवराज ढकालका अनुसार अनुसन्धानलाई शंकाले सघाउन सक्छ। भने, ‘घटनाको परिस्थिति र प्रमाणले कसैलाई इङ्गित गर्दै गयो भने शंका लागेकै व्यक्तिबाट अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।'
प्रहरीले निर्मला 'गायब' भएको दिन चक्रदेव कहाँ थिए भन्ने बुझ्न चाह्यो। प्रहरीको यो शंकाले अनुसन्धानलाई सघाउने सम्भावना बलियो थियो।
तर, उनकी बहिनी लक्ष्मीको फरक भनाइ आयो- 'दाइ मिल जानुभएको थियो।'
'खाना खाएर म दिउँसो करिब १ बजेतिर कोठाभित्र छिरेँ। उहाँ (श्रीमान् चक्र) मोबाइलमा प्रभास हिरोको फिलिम हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै १५ मिनेट हेरिसकेपछि निद्रा लाग्यो। सुतेँ। ब्युँझिदा त करिब ४ बजिसकेको रहेछ,' चक्रदेवकी श्रीमतीले भनिन्।
'सेतो सर्ट लगाएको, पातलो कद, हल्का दाह्री पलाएको एउटा केटो निर्मलाको साइकल देखिएको दिन यतै बसेको देखेको थिएँ,' एक स्थानीयले प्रहरीलाई दिएको जानकारी ठ्याक्कै चक्रको हुलियासँग मिल्न जान्थ्यो। हुलियाले पनि प्रहरीको शंकालाई बलियो बनाउँदै थियो।
शंकाको एउटा दृश्य यस्तो उब्जियो - निर्मला पानी परेकाले साथीको दाइ चक्रको घरमा ओत लाग्न पुगिन्। गर्भवती श्रीमतीबाहेक अरु कोही घरमा नभएको अवस्था। श्रीमती पनि एउटा कोठामा सुत्न गइसकेकी।
अन्ततः उनले नबोली सुखै पाएनन्। मुख खोले, 'मोबाइलमा पाँच वटा फोटो थियो सर।'
‘मैले खिचेको हैन, अरुको मोबाइलबाट ‘सेयर इट’ मार्फत् सारेको हुँ,' चक्रको दावी।
प्रहरीले फेरि सोधे – 'कसको मोबाइलबाट सारेको?'
‘ऊमाथि शंका गर्ने धेरै कारणहरु देखिएकाले नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ,’ कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी कृष्णराज ओझाले भने, 'डिएनए नमिलेपछि ऊ अहिले हाम्रो अनुसन्धानको घेरामा छैन।'
अहिले उनी रोजगारीको सिलसिलामा फेरि पहिले झैँ भारत पुगिसकेका छन्। उनका बुबालाई भने हामीले कञ्चनपुरको धर्नास्थलमा भेटेका थियौं। उनी अहिले पनि 'निर्मलाका लागि न्याय'को धर्नास्थलमा नै पुगेर आवाज उठाइरहेका छन्।
(हामी कञ्चनपुर पुग्दा धर्नास्थलमा निर्मलाका बुबा, आमा, सौतिनी आमा तथा अधिकारकर्मीहरु थिए। अहिले धर्नास्थलमा सौतिनी आमामात्र छिन्। बुबालाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। सँगै आमा पनि आएकी छिन्। बम दिदीबहिनीको घरमा जाने भनेर निर्मला गएकी र घर नफर्किएका कारण शंकाको सुई त्यहाँ पनि तेर्सिएको छ। के फर्स्ट क्राइम सिन बम निवास हो? किन स्थानीयबासीले बम निवासमा ढुंगा हानी आक्रमण गरे? चार महिना भइसक्यो, महेन्द्रनगरका चोकचोकमा अझै निर्मलाको चर्चा छ। कस्तो छ चर्चा? कसलाई दोषी मान्छन्, उनीहरु? पहिलोपोस्टको #WhoKilledNirmala शृङ्खलाको अर्को भागमा)